Degmada Örnsköldsvik waxaa ku nool 56 000 oo qof. Kala barkood waxeey degganyahiin magaalada Örnsköldsvik ama dhulka u dhaw magaalada. Bjästa, Husum, Bredbyn iyo Köpmanholmen waa deggaanyada ugu weeyn.
Haddii aad tageysid Örnsköldsvik waxaa soo qaadankartaa adiga tareen, diyaarad, bas ama baabuur. Tareenka wuxuu istaagi isteeshinka oo ku yaal dhex bartamaha Örnsköldsvik. Tareemada gobalka, oo la dhaho Norrtåg, waxey istaagaan meel u dhow isbitaalka Örnsköldsvik iyo Husum.
Basaska aado magaalooyinka kale iyo tuulooyinka yar oo degmada kamid ah waxey istaagaan isteeshinka oo ku yaal dhex bartamaha Örnsköldsvik. Basaska oo magaalada dhexdeeda ka shaqeeyo waxey ka baxaan meesha la dhaho Örnparken, oo ku ag’taalo suuqa Örnsköldsvik.
Eroboorka diyaaradaha wuxuu ku yaal meesha la dhaho Gideå, 25 kiilomitir bey u jirtaa dhex bartamaha Örnsköldsvik.
Haddii aad dooneysid inaa tagtid jasiiradaha yaryar waxey doomaha ka baxaan meesha la dhaho Köpmanholmen, oo qiiyaas ahaan ka jirto 20 kiilomitir koonfurta Örnsköldsvik. Jasiiradaha kuwa ugu weeyn waxaa la dhaha Ulvön iyo Trysunda, oo isgaarsiinta sanaadka oo dhan waa le helaa.
Örnsköldsvik Xeebteeda sareyso[Höga kusten] waxey kamid tahay dhaxalka aduunka. Waxa Xeebta sareyso qaaska ka dhigaayo baa ah in dhulka biyaha kor uga soo kacaayo 1 sentimitir sanadkasto.
Xeebta sareyso waa meel aad loo jecelyahay in dalxiis loogu tago, oo jasiiradaha yaryar iyo dhulka dhirta ka baxdo. Xeebta gun dheerta waxaa lagu suubinkara shiraacasho. Xeebta sareyso gees ilaa gees waa soo lugeyn kartaa ilaa 130 kiilomitir laga soo bilaabo buundada Xeebta sareyso meesha ku xirantahay oo degmada Kramfor ilaa dhamaadka dhex bartamaha Örnsköldsvik. Adiga waxaa intaas oo dhan la kulmi dhul qurux badan iyo waxaa ku soo nasankartaa caruushooyinka laga ag dhisay wadada safarka.
Dalxiiska oo Xeebta sareyso waxeey adiga talooyin kaa siin meelo oo dalxiis loogu tagikaro, lagu noolankaro iyo dhaq-dhaqaaqyo lagu suubinkaro oo ku yaal Örnsköldsvik iyo degmooyinka dariska nala ah oo Kramfors, Härnösand iyo Sollefteå. Adiga warbixin waxaad ka heli bogga internetka www.hogakusten.com . Adiga su’aalooyinkaada waxaad xitaa noogu soo diri kartaa e-mailka info@hogakusten.com ama soo wac +46(0)771-26 50 00.
Xagaaga 2017 waxaa la furi goob booqasho oo laga furi buundada Xeebta sareyso dhinaca woqooyiga. Meeshaas fadlan adiga noogu imaaw sidaa u heshid warbixin shaqsi.
Tuulooyinka, magaalooyinka ugu waa weeyn iyo magaalada Örnsköldsvik waxaa laga heli dhowr nooc oo kala duwan oo loo degganaankaro. Nooca ugu badan oo degganaansho ahaan waa guryaha loo yaqaan bangalo. Qiimaha guryahaas waa uu hooseeyaa haddii lala barbar dhigo dhaqliga qoysaska soo galo. Dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaa la dhisay dhowr xabo oo guryaha dhaadheer oo laga dhisay dhulka qiimaha le oo dekeda oo dhex bartamaha magaalada hal xaafad lee baa u dhaxeeyso.
Shirkada guryaha oo degmada, oo la dhaho Övikshem, waxey ku lee dahay guryo la kireysto dhex bartamaha Örnsköldsvik iyo dhowr magaalo oo kuwa ugu waa weeyn. Haddii guri la kireysto aad raadineysid fadlan la soo xiriir Övikshem. Soo wac qeybta adeega: +46(0)660-29 93 50 ama u soo dir e-mail ciwaanka: info@ovikshem.se.
Adiga waxaa xitaa la xiriiri kartaa shirkadooyinka kale guryaha kireyo oo shaqsiga iyo kuwa guryaha iibsho.
Haddii aad qorsheyneysid inaad guri dhisato waxaa markaas ku caawin xafiiska maamulka arrimaha dhimooyinka oo degmada oo waxey kaa caawin su’aalooyinka ku saabsan dhulalka, xeerarka oo arrimaha dhismooyinka iyo oggolaanshooyinka aad u baahantahay inaad heshid. U soo dir e-mail: bygglov@ornskoldsvik.se ama la soo xiriir telefoon lambarka guud oo degmada: 0660-880 00.